Pejy mpamosavy magicien Download sy miloko maimaim-poana
Tsy noho i Merlin sy Houdini ihany, mpimasy dia lohahevitra malaza ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe koa. Boky sy andian-tantara amin'ny fahitalavitra maro no niresaka momba ny mpamosavy sy majika, ary ny fikafika majika dia hita hatraiza hatraiza ankehitriny. Tena nisy ve izany, hafetsena, nofinofy?
Pejy fandokoana mpanao majia
Ny fahaizana majika nampanantenaina ny mpamosavy dia mahavariana fotsiny. Mizaha amin'ny alàlan'ny fanangonana maimaimpoana ireo pejin'ny mpamosavy. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny sary fandokoana enchanted tsirairay avy.
Mpamosavy sy dragona
Mpanao majika Circus
Mpamosavy manana volombava
Druid dia mifangaro volo majika